Tamarta Shidaalka Ku Darso Hawlgalkayaga Hufnaanta Hufan - Tamarta Mahadsan
Home > Dayactirka Tamarta Ganacsiga
Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo CKordhinta tamarta korontada taas oo ka caawin doonta shirkaddaada in ay noqoto mid wax-ku-ool ah oo ay ku sii yaraanayso tamarta ganacsigaaga. Waxaan qaadannaa habka hantida oo dhan iyo in aan eegno hoos u dhigida isticmaalka ka hor intaan wax tallaabooyin kale la tixgelin.
Guryaha ganacsiga waxaan ku rakibi karnaa baako waxqabadyo ah si loo hubiyo in aad hufan tahay:
Fabric ningaxsi loo yareeyo qarashka tamarta. had iyo jeer waa ikhtiyaarka koowaad iyo kan ugu wanaagsan.
LED Laydhkaiyada oo si toos ah u soo iibsato alaabooyinka ka imaanaya soo saarayaasha si ay u joojiyaan kharashaadka raasumaalka.
PV PVku socdaan si loo abuuro koronto.
Biomasspellet qoryaha iyo boorsada qoryaha qoryaha.
Waa maxay sababta loo maalgeliyay tamarta korontada ee tamarta korontada?
Talo iyo hagid ku saabsan dhiirrigelinta maaliyadeed sida Cunto-ku-galka Taraafiga iyo Dhiirrigelinta kuleylka cusub
Hantidhawrka goobta bilaashka ah si looga wada hadlo meelaha laga yaabo inay kaydsadaan
Fulin buuxda HETAS, OFTECiyo Gaadiidka Badbaadada Gaaska.